के हुन्छ बेलाबेलामा वी’र्य नफाल्दा ? यस्तो छ डाक्टरको ड’रलाग्दो भनाइ ! – ramechhapkhabar.com
के तपाईंलाई पिसाब छिटोछिटो लाग्ने, पोल्ने, पिसाब गर्दा धारा छुटने, मसिनो हुने, धारा छुट्दा छरिएर जाने आदी स’मस्या छ रु अथवा, अ’ण्ड’कोष सु’नि’ने, गनाउने, नाइटोमुनि दु’ख्ने’, वी’र्य खस्दा पो’ल्नेजस्ता स’मस्याले सताउँछ र यी मध्ये कुनै पनि लक्षण जुनसुकै उमेरका पुरुषमा देखिएको छ भने सोच्नुस तपाइको प्रोस्टेट ग्रन्थी ९पुरुष प्रजनन ग्रन्थी०मा स’ङ्क्रमण भएको हुन सक्छ । पूर्व राष्ट्रपति डा। रामवरण यादवलार्इ पनि यस्तै लक्षण देखिएपछि भारतको अस्पतालमा परीक्षण गर्दा प्रोस्टेट क्या’न्सर भएको पत्ता लागेको थियो । पछि अमेरिकामा उनको उपचार गरियो ।
समयमै उपचार गरे सजिलै निको हुने यो रो’गलाई बेवास्ता गरे क्या’न्सर हुनसक्ने ख’तरा रहेको चिकित्सकहरू औल्याउँछन् । युरोलोजिस्ट डा दीपक रौनियारका अनुसार प्रोस्टेटसम्बन्धी रो’गमा उपचार गर्दा ठूलो स’मस्या नभए पनि स’ङ्क्रमण बढ्दै गए यसले धेरै क’ष्ट त दिन्छ नै पारिवारिक सम्बन्धमा समेत खटपट ल्याउँछ ।
‘प्रोस्टेट ग्रन्थीको मुख्य काम वी’र्य स्वस्थ राख्ने र त्यसलाई हुर्काउन मदत गर्ने हो । वी’र्य त्यतिबेला नियमित उत्पादन भइरहन्छ जतिबेला खर्च हुन्छ । जब वी’र्य खर्च हुन छाड्छ अर्थात् स्थिर रुपमा रहन्छ त्यसपछि स’मस्या देखिन थाल्छ । अझ सजिलो गरी बुझ्दा दुई बाल्टीमा पानी भरौँ । एउटाको पानी नियमित फेरौँ तर अर्कोमा नफेरौँ । एक महिनापछि हेर्दा दिनहुँ फेरेको बाल्टीको पानी सफा हुन्छ भने अर्कोमा भने नफेरिँदा लेउ लाग्न थाल्छ । हो त्यस्तै हो वी’र्य र प्रोस्टेट ग्रन्थीको सम्बन्ध पनि ।
जति वी’र्य निस्क्यो उति नै प्रोस्टेटलाई फाइदा हुन्छ,’ डा। रौनियारले भने ।चिकित्सकका अनुसार महिना या वर्षौंसम्म यौ’न सम्पर्क नहुँदा प्रोस्टेटमा स’मस्या देखिन्छ । त्यसैले यसबाट बच्नका लागि नियमित यौ’न सम्पर्क गर्ने, २४ घन्टामा पाँच लिटर पानी पिउने, नियमित रुपमा पिसाबको जाँच गरी स’ङ्क्रमणबाट बच्ने र म्यो’ग्नेसियमयुक्त खानेकुरा जस्तै काजु, पेस्ता, बदाम, ओखरलगायत खाने गर्नुपर्ने चिकित्सकहरूको सुझाव छ ।